Cindau - Offline Wikipedia
- updated 2020/11/18 22:25
Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe. UMambo hwenyu ngahwuuye. Kuda kwenyu ngakuitwe pasi sokudenga. Tipei nhasi kudya kwedu kwakwezuva. Tiregererei zvatinokutadzirai sekuregerera kwatinoita vakatitadzira. Musatipinze mukuedzwa, asi mutinunure mune zvakaipa.
Mainstream Shona "kuridza tsamwa and the Ndau version kuxapa: 'X' is used for the click consonant [ᵏǁ].
Mainstream Shona "Kurara and the Ndau version Kuqambaya: 'Q' is used for the click consonant [ᵏǃ].